Adobe Lightroom qaybtiisa 2.0 waxay u keentaa taxane ah astaamo cusub oo muhiim ah Android | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Lightroom qaybtiisa 2.0 waxay u keentaa taxane ah astaamo cusub oo muhiim ah Android
Adobe ugu dambeyntii helitaanka baytariyada Waxayna u muuqataa inay u heellan tahay inay muujiso wax yar oo jacayl ah barnaamijka Lightroom ee ku jira Android si markaa isticmaale kasta uu u helo faa'iidooyin taxane ah waxa tafatirka sawirku yahay.
Maanta waxaa loo cusbooneysiiyey nooca 2.0 oo dhowr astaamo cusub lagu soo daray sida Taageero qaab RAW iyo aaladda loo yaqaan Erase Haze oo kaa caawin doonta inaad ku darto saamayntaas gaarka ah sawirrada aad ka qaadatay kamaradda taleefankaaga Android.
Kaliya kuma ekaanin labadan ikhtiyaar oo aad u xiiso badan sida qaabka RAW iyo qalabka Erase HazeTaabadalkeed, waxaa ka mid ah kor u qaadista Qaybta Tone si loo hagaajiyo midabka muuqaalka iyo hooska sawirka. Sidan ayaad ku abuuri kartaa midab si fiican loo qaabeeyey sawirka ama ku celcelin kartaa muuqaalka dhaqameed ee sawirka madow iyo caddaan ah.
Waxay ku jirtaa tan midabka iyo qalabka B&W halkaas oo aan hadda ka heli karno astaamo la mid ah nooca desktop-ka oo leh taxane taxane ah oo midab kasta leh. Muuqaal kale ayaa ah iyada oo loo marayo dhibcaha xakamaynta ee aaladda gooladaha si buuxda wax looga beddelo codka iyo ka soo horjeedka sawirka.
Si loo dhammeeyo, a fududahay wadaagida sawirada si toos ah barnaamijka 'Adobe Premiere Clip', oo aan muddo dheer ku soo jirin Android-ka kaas oo u oggolaanaya tafatirka fiidiyowga ee horumarsan.
Waxaad haysataa codsigan gabi ahaanba waa lacag la'aan ka dukaanka Play maadaama ay hore u cusbooneysiisay Adobe oo adeegsade kastaa wuu ku dhowaan karaa tayada weyn ee ay qaddarinayso. Daqiiqad aan caadi aheyn oo kamarad wanaagsan lagaa helo aaladdaada moobiilka iyo suurtagalnimada in lagu rakibo Lightroom qaybteeda 2.0
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Adobe Lightroom qaybtiisa 2.0 waxay u keentaa taxane ah astaamo cusub oo muhiim ah Android
Sidee zombies-ku ugu soo ifbaxay 100-kan sano [Muuqaal]
Keegga iyo haweeneyda ku jirta shaqada gaarka ah ee Vicente Romero